Isaka anotuma Jakobho kuPadhani-aramu (1-9)
Hope dzakarotwa naJakobho ari kuBheteri (10-22)
Vimbiso yaMwari inodzokororwa kuna Jakobho (13-15)
28 Saka Isaka akashevedza Jakobho, akamukomborera, ndokumurayira achiti: “Usatora mudzimai pavanasikana veKenani.+ 2 Enda kuPadhani-aramu kuimba yaBhetueri, baba vaamai vako, utore mudzimai ikoko pavanasikana vaRabhani,+ hanzvadzi yaamai vako. 3 Mwari Wemasimbaose achakukomborera, oita kuti ubereke, uve nevana vakawanda, uye uchava ungano yemarudzi.+ 4 Uye achakupa chikomborero chaAbrahamu,+ iwe nemwana* wako, kuti uite kuti nyika yawanga uchigara uri mutorwa ive yako, yakapiwa Abrahamu naMwari.”+ 5 Saka Isaka akaita kuti Jakobho aende, uye Jakobho akasimuka akananga kuPadhani-aramu, kwaRabhani mwanakomana waBhetueri muAramu,+ hanzvadzi yaRibheka,+ amai vaJakobho naIsau. 6 Isau akaona kuti Isaka akanga akomborera Jakobho akamuendesa kuPadhani-aramu kuti anotora mudzimai ikoko, uye kuti paakamukomborera akamurayira achiti: “Usatora mudzimai pavanasikana veKenani,”+ 7 uye kuti Jakobho akateerera baba vake naamai vake akaenda kuPadhani-aramu.+ 8 Isau akabva aziva kuti vanasikana veKenani vakanga vasingafadzi Isaka baba vake,+ 9 saka Isau akaenda kuna Ishmaeri akatora Maharati mwanasikana waIshmaeri mwanakomana waAbrahamu, hanzvadzi yaNebhayoti, kuti ave mudzimai wake, kuwedzera pamadzimai aakanga agara ainawo.+ 10 Jakobho akabva kuBheeri-shebha ndokunanga kuHarani.+ 11 Akazosvika pane imwe nzvimbo akagadzirira kuti arare ipapo nekuti zuva rakanga ravira. Saka akatora rimwe dombo ipapo kuti atsamire, akabva arara panzvimbo iyoyo.+ 12 Akarota achiona manera akanga akamiswa panyika achisvika kudenga; uye akaona ngirozi dzaMwari dzichikwira nekudzika nawo.+ 13 Uye akatarisa akaona Jehovha akamira pamusoro pawo, achibva ati: “Ndini Jehovha Mwari waAbrahamu baba vako naMwari waIsaka.+ Ndichapa iwe nemwana*+ wako nyika yaurere pairi. 14 Uye vana* vako vachawanda seguruva renyika,+ vachapararira kwese kwese kumabvazuva nekumavirira uye kuchamhembe nekumaodzanyemba, uye mhuri dzese dzepanyika dzichakomborerwa* nekwauri uye nekumwana* wako.+ 15 Ndinewe, uye ndichakuchengetedza kwese kwaunoenda, uye ndichakudzosa kunyika ino.+ Handisi kuzokusiya kusvikira ndaita zvandakuvimbisa.”+ 16 Jakobho akabva apepuka akati: “Chokwadi Jehovha ari munzvimbo ino, asi ndanga ndisina kuzviziva.” 17 Akatya akabva awedzera kuti: “Nzvimbo ino inoshamisa chaizvo! Iyi inofanira kunge iri imba yaMwari chete,+ uye iri ndiro gedhi rekudenga.”+ 18 Saka Jakobho akafumomuka, akatora dombo raakanga akatsamira, akarimisa semucherechedzo, akadira mafuta pamusoro paro.+ 19 Akabva atumidza nzvimbo iyoyo kuti Bheteri,* asi guta racho raimbonzi Ruzi.+ 20 Jakobho akabva aita mhiko, achiti: “Kana Mwari akaramba aineni, akandichengetedza parwendo rwangu, uye akandipa zvekudya nezvekupfeka, 21 ndodzoka zvakanaka* kuimba yababa vangu, Jehovha achange aratidza kuti ndiMwari wangu. 22 Uye dombo iri randamisa kuti rive mucherechedzo richava imba yaMwari,+ uye ndichatoona kuti ndakupai chegumi chezvese zvamunondipa.”
^ Kureva kuti “Imba yaMwari.”
^ Kana kuti “ndodzoka nerugare.”